जनतालाई भिडाएर कसलाई खुसी पार्न संविधान संशोधन ? « Pahilo News
२२ मंसीर । अमेरिका भ्रमणमा रहेका नेकपा (एमाले) का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संविधान संशोधनको प्रस्तावले इतिहासदेखि नै मिलेर बसेका नेपाली जनतालाई आपसमा भिडाउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । अमेरिकामा रहेका नेपाली पत्रकारहरुसँगको लाइभ भिडियो पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रश्न गरे, ‘कसलाई खुसी पार्न यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको हो ?’
संविधान संशोधनको प्रस्तावबाट मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर हुने र जनताबीच भिडन्तको स्थिति आउने आँकलन गर्दै उनले भने, ‘रोल्पा, रुकुमदेखि गुल्मी, अर्घाखाँची, बुटवल सबैतिर जनता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसबाट जनता के चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट हुँदैन र ?’
पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भनेः
0 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सल्लाह नगरेर प्रस्ताव ल्याउनुभयो । हामीसँग त गर्नु भएन नै, स्वयम् सत्तारुढ दलसँग पनि गर्नुभएन, मधेसी मोर्चासँग पनि गर्नुभएन । त्यही कारण अहिले उहाँको प्रस्ताव स्वयम् उहाँका लागि प्रत्युत्पादक भएको छ ।
0 अडानको मामिला कहिल्यै खुट्टा कमाउनु हुँदैन । राजनीतिक अडान प्रस्ट हुनुपर्छ । मैले प्रचण्डजीलाई भनेको थिएँ, ‘तपाईं कुनै त्यस्तो काम नगर्नूस्, जसबाट तपाईं घर न घाटको हुने अवस्था आओस् । एमालेलाई पन्छाएर केही गर्न सक्नुहुन्न ।’ दोस्रो कुरा, मधेसी दल पनि सन्तुष्ट छैनन् । अनि कसलाई खुसी पार्न यो प्रस्ताव आएको हो ?
0 कसैलाई किन खुसी पार्नुपर्यो ? किन यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुपर्यो ? तपाईंलाई थाहा छ, मैले २२ महिना सरकार चलाएँ । कतिपय मामिलामा मेरो भित्री र बाहिरी शक्तिसँग टक्कर पर्यो होला । अनमिनलाई पठाउँदा, माओवादीलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा रुपान्तरण गर्दा, संविधानसभा जोगाउँदा । कसरी डिल गर्ने भन्ने आफूमा भर पर्छ ।
0 प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई गणतन्त्र र संघीयता विरोधी भनेर आरोप लगाएको सुनेँ । ए, गणतन्त्र ल्याउने एमाले, परिवर्तन गर्ने एमाले । अनि उल्टै एमालेलाई आरोप ? त्यो त्यही बुटवल हो, जहाँ ०६२ मसीर ४ गते पहिलो पटक विशाल आमसभा भएको थियो । हामीले त्यहाँबाट पश्चिम र पूर्वसम्म सभा गरेर राजतन्त्रलाई चुनौती दिएका थियौँ । मैले त्यतिबेला भनेको थिएँ, ‘आन्दोलनको सुनामी आउँछ ।’ त्यही आन्दोलनको जगमा उभिएर हामीले संबैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको कांग्रेस र सशस्त्र युद्धको पक्षमा रहेको माओवादीलाई गणतन्त्रको एजेन्डामा ल्याएका थियौँ । अनि त्यहाँ भएको प्रदर्शन र एमालेलाई गणतन्त्रविरोधी भन्ने ?